डा. गोविन्द केसीको जित भएकै हो त ? – KhabarTime
भट्टराईले पत्रकारलाई थमाएको कागजमा (चिकित्सा शिक्षा) विधेयकको आवरणमा डा. केसीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संनेकपाका युवा नेता भट्टराईले वितरण गरेको नोटमा विधेयकबारे १० बुँदा छन् । त्यसमा डा. केसीका तीन सवाल भनेर जवाफ लेखिएको छ । भट्टराईको निष्कर्ष छ, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीको अधिकांश माग पूरा भइसक्यो ।
सुरुमा चिकित्सा शिक्षाकै चर्चा गरौं ।विधान र बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा कसरी प्रयोग गर्न गरिँदैछ भन्ने उनका मागहरुले प्रष्ट भएको दाबी छ ।
पृथ्वीनारायणको मूल्यांकनः जित्नेको मात्रै कुरा नगरौं !